China iqokobhe lebrandman strongman mveliso kunye nabathengisi | Ukuqhayisa
Ibhegi yesanti eyomeleleyo
Ibhegi yethu yesanti eyomeleleyo iyaphuculwa ngokwendlela yesanti yethu eStrongman. Kungangcono ukunqanda ingxowa yesanti yomntu oqinileyo evula uziphu. Yomelele ngakumbi! Umsebenzi wawo uyafana nengxowa yesanti eStrongman. Unokwanga, ukuwa, ukuhambisa ... uqeqesho ngamatye anzima.Ingathatha indawo yeebhola ezinobunzima kunye namatye, kwaye inokuthathwa ngokulula.
I-Strongman Sandbags inokukhululwa ize iphinde izaliswe kwenye indawo yokuzivocavoca, ibala, ipaki, njl. Akukho zithintelo kwiindawo zoqeqesho lokuzivocavoca. Ingazaliswa ngezinto ezahlukeneyo ukulungisa ubunzima, njengentlabathi, igrabile, ukutya ...
Isikhwama esomeleleyo esenziwe ngebhanti senziwe nge-1050D Cordura, i-100% ye-nylon, i-YKK zipper, ilayishwe kabini, intambo eyomeleleyo enezitishi ezi-3. ihlala iqulethwe ngokupheleleyo njengoko usebenza kwirejimeni yakho. Kukho ii-2pcs zokubamba ezincinci kwifanele yokuvula, ungavula ukuzalisa izinto ngokulula.
Ubunzima obuphathekayo beStrongman Bag buxhomekeke kubuninzi kunye nobungakanani beendaba ezisetyenziswayo. Imithombo yeendaba ethile inokubangela ukuba ubunzima bebhegi bube ngaphezulu okanye ngaphantsi komthamo wobunzima obuqikelelweyo. Ngenxa yobume belaphu kunye nokusetyenziswa okuchongiweyo, iingxowa zeStrongman zinokwanda ngokuhamba kwexesha kunye nokusetyenziswa. Ukongeza, ezi ngxowa azizaliswanga.
5.Ingxowa yokufaka eyakhelweyo
Egqithileyo Yondla Ingxowa
Okulandelayo: Isitya esimnandi somzimba wokuzilolonga
Isipaji esinamandla somntu omnyama
Indoda eyomeleleyo iphosa ibhegi
Intambo yokunyuka yokuQiniseka nokuQiniseka koQeqesho